Fayyaa: Ogganaa jibbuu fi sababoota dhukkuba onneetiif nu saaxilan shanan - BBC News Afaan Oromoo
Dhimmooti isiin hinbeekne garuu kan onnee keessan miidhan jiraachu beektuu? T
Hundi keenyaa tamboon, garmalee furdachuu fi sochii qaamaa taasisuu dhabuun carraa dhukkuba onneetiin qabamuu akka guddisu ni beekna ta'a.
Garuu sababoonni kana dura dhageessanii hinbeekne kan biraas jiru. Akka ragaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti (WHO) dhukkubbiin ilkaanii dhiibeewwan addunyaa kanaa du'aatiif sababa ta'an keessaa tokko.
Sababiiwwan dhukkuba ikaanii kanneen dhageessanii beektuu laata?
1. Qulqullina ilkaanii eeggachuu
Ilkaan keenyaa fi onneen keenya kan nu yaadnuun caalaa walitti hidhaminsa qabu.
Qorannoowwan heddunis namoonni rakkina fayyaa afaanii qaban caalaa dhukkuba onneetiif akka saaxilaman mul'isu.
Dhiiguun ykn ididdiin/irgi dhukkubsatu akka baakteeriyaan dhiiga keessa galuuf carraa uumaaf.
Isaan boodas qaama onnee dhiiga waraabu keessatti coomni akka umamu taasisa.
Akkasumas tiruun akka protiinii sadarkaan saa olaanaa ta'e akka umu taasisuun hiddi dhiigaa akka dhukkubbiin itti dhagahamu sababii taa'u danda'a.
Gubaatiin ykn dhiitii kunis dhukkuba onnee ykn dhiibbaa dhiigaaiif sababii ta'u mala. Fallii saa maaliidha ree? Ilkaan kirriidhaa yeroo hunda qulleessuun hakiima ilkaani bira dhuquus hin dagatiinaa.
2. Ogganaa keessan jibbuu
Qorannoonn biyya Siwiidiin tokko hojiin cinqamuun dhukkuba onneen qabamuuf akka carraa dabalu mul'iseera
Kuni qoosaa miti - ogganaa kee jibbuun fayyina onnee keetii ni balleessa.
Qorannoon waggaa 10 f Siwidiiniitti gaggeeffame Barruu Wallaansaa Biritish keessatti maxxanfame tokko akka mul'iseetti, walitti dhufeenyi badaan ogganaa waliin bakka hojiitti qabaatamu namoota %40 ta'an akka dhibee onneetiin qabamaniif carraa ni dabala.
''Dhukkubbiin onnee irra caalaa dhiphina hojiin dabala,'' jedha Vijaay Kumaar hakimiin onnee Institiyuutii Fayyaa Onnee Orlaandoo (Ameerikaa).
Dhimmoota gara biraa kan akka irriiba gahaa dhabuu, waliin walitti dabalamee balaan dhukkuba onnee akka dabalu taasisa.
3. Taatee Naasisaa
Taatee naasiisaan dhugumatti onnee keessan ni cabsa
Waan naasisaan kan akka du'aatii maatii fa'ii wayita dhagahamutti dhugumaati onnee keessan cabsu danda'a.
Akka Waldaa Minopoos Ameerikaatti (American Menopause Society), hiddi dhiigaa dubartii jireenya ishee keessatti yeroo sadiifi isaan oliif taateewwan naasiisoo ta'an keessa dabarte, ishee omaa hinmudatiin wali biratti yoo ilaalamu fiixaan bahiinsa hojiitiin gadaanaatu taati.
Oggeessi Onnee Jaakii Eunaanyi akka jedhuutti, dhibbannaa olaanaanis dhukkuba onneetiif sababii olaanaa ta'u mala.
Kunis dhukkuba onneetiif sabab ta'usaatiin alattis dhiibbaa dhiigaa ol kaasa.
4. Kophummaan namatti dhagahamuu
Loneliness can be very bad for your heart
Barruun Wallaansaa Biritish kan biraa akka mul'iseetti, namonni walitti dhufeenya hawaasummaa gadaanaa qaban carraa dhibee onneetiin qabamu %29 kan qabanii fi dhiibbaa onneen qabamuuf %32 akka qaban hima.
Sababiiwwan kanaaf saaxilan keessaa tokko qofummaa, dhibbachuu fi namoota miira isaanii tasgabbeessuuf kan isaan gargaaru hinqabne dha.
Yunivarsitiin Oksifoordi qorannoo bara 2014tti maxxanseen dubartoota 700,000 irrati qorannoo gaggeesseera. Innis namoonni hiriyaa waliin jiraatan kanneen qofaanii jiraatanii irra carraa dhukkuba onneetiin du'u %28 gadii qabaatu.
Waldaan Onnee Ameerikaa akka jedheetti, biyyattii keessatti dhukkubsattoonni onnee %33 dhiphanaan qabu.
Oggessoonnis namoonni dhukkuba sammuu qabanis murteewwan gaarii taasisuuf ni cinqamu ta'a jechuun tilmaamu.
Nieca Goldberg, Niiwu Yoorkiitti Daarektarri Wallaansa Jiddu gala Fayyaa Dubartootaa akka jedhaniitti, amalliiwwan soorta fayya qabeessi ykn fayyadama alkoolii murteessuu namoota rakkina dhiiphiina qabaniif fooyyee ni argamsiisa.
"Namoonni haala badaa keessatti argaman, akka fayyaa ta'an ykn dhukkubsatan hinyaadan,'' jedhu doktarri kun.
6. Umurii dhala itti dhaabamu
Jijjiramni hormoonii dhala dhaabuun walqabatees fayyaa onnee dubartootaaf madda ta'u danda'a
Dubartoonni umurii dhala itti dhaaban booda dhukkuba onneetiif saaxilam ni danda'u.
Kunis hirina hormoonii 'oestrogen' qaama isaanii keessattiin walitti hidhama qabaata.
'Oestrogen' keessoo onnee dhiiga dadabarsuutiif gumaata gaarii qaba. Innis hiddii dhiigaa akka garaati akka socha'u ni gargaara.
Oggeessii Onnee Jaakiin Eubaanyi, umuriin hiddi dhiigaa akka gogu jabaatu akka taasisu dubbatu. Knis dhiibbaa onnee akka dabaluuf kan gumaatudha.
Haa ta'u malees, sooranni gaarii fi sochiin qaamaa walitti fufiinsa qabu haalawwan kanneen ofiirraa ittisuuf ni gargaaru.
Viidiyoo, Addunyaa keessatti wal'aansa jijjiirraa onnee isa jalqabaa